Apokalypsy 13 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
13 Ary nijanona teo ambonin’ny fasika+ any an-dranomasina ilay dragona. Ary nahita bibidia+ niakatra avy tao amin’ny ranomasina+ aho. Nanana tandroka folo+ sy loha+ fito io bibidia io, ary nisy diadema folo teo amin’ireo tandrony, fa teo amin’ireo lohany kosa nisy anarana fanevatevana an’Andriamanitra.+ 2 Ary ilay bibidia hitako dia tahaka ny leopara,+ fa ny tongony kosa tahaka ny an’ny orsa,+ ary ny vavany tahaka ny vavan’ny liona.+ Ary nomen’ilay dragona+ hery sy seza fiandrianana ary fahefana lehibe+ ilay bibidia. 3 Ary hitako fa ny lohany iray dia toy ny hoe voakapa ka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay ratra+ saika nahafaty azy. Ary nanaraka an’ilay bibidia ny tany manontolo sady nitolagaga taminy. 4 Ary nivavaka tamin’ilay dragona izy ireo, satria izy no nanome fahefana an’ilay bibidia. Nivavaka tamin’ilay bibidia koa izy ireo sady niteny hoe: “Iza no tahaka ny bibidia, ary iza no afaka miady aminy?” 5 Ary nomena vava mirehareha+ sy manevateva an’Andriamanitra+ ilay bibidia sady nomena fahefana hiasa roa amby efapolo volana.+ 6 Koa nanao teny fanevatevana+ an’Andriamanitra izy, mba hanevatevana ny anarany sy ny fonenany, dia ireo monina any an-danitra.+ 7 Ary navela+ hiady tamin’ny olona masina sy handresy azy ireo izy,+ sady nomena fahefana tamin’ny foko sy vahoaka sy olona samy hafa fiteny ary firenena rehetra. 8 Ary hivavaka aminy ny mponina rehetra amin’ny tany. Nanomboka tamin’ny nanorenana izao tontolo izao+ no efa tsy voasoratra tao amin’ny horonam-bokin’ny+ fiainana ny anaran’izy ireo, dia tao amin’ilay horonam-bokin’ny Zanak’ondry, izay efa novonoina ho faty.+ 9 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino.+ 10 Raha misy natao ho amin’ny fahababoana, dia ho lasa babo+ izy. Raha misy mamono amin’ny sabatra, dia hovonoina amin’ny sabatra izy.+ Eto no ilana ny fiaretan’ny+ olona masina+ sy ny finoany.+ 11 Ary nahita bibidia+ hafa iray niakatra avy tamin’ny tany+ aho. Nanana tandroka roa tahaka ny an’ny zanak’ondry izy, nefa niteny toy ny dragona.+ 12 Ary izy nampihatra teo imason’ilay bibidia voalohany ny fahefana rehetra nananan’izy io.+ Ary ny tany sy ny mponina teo aminy dia nasainy nivavaka tamin’ilay bibidia voalohany, izay sitrana tamin’ilay ratra saika nahafaty azy.+ 13 Ary nanao famantarana+ lehibe izy, ka nandatsaka afo avy any an-danitra ho amin’ny tany mihitsy aza, teo imason’ny olona. 14 Ary namitaka ny mponin’ny tany izy, tamin’ny alalan’ireo famantarana navela hataony teo imason’ilay bibidia, sady nilaza tamin’ny mponin’ny tany koa izy mba hanao ny sarin’ilay+ bibidia, izay voan’ny sabatra+ nefa velona indray. 15 Ary navela hanome fofonaina an’ilay sarin’ny bibidia izy, mba hiteny ilay sary sady hampamono ho faty izay rehetra tsy nety nivavaka taminy mihitsy.+ 16 Ary notereny ny olona+ rehetra, na kely na lehibe, na manankarena na mahantra, na olona afaka na mpanompo, mba hasiana marika teo amin’ny tanany havanana na teo amin’ny handriny,+ 17 ary mba tsy hisy hahazo hividy na hivarotra, afa-tsy izay nanana ilay marika, dia ny anaran’ilay+ bibidia na ny isa manondro ny anarany.+ 18 Eto no ilana fahendrena: Aoka izay mahira-tsaina hanao kajy ilay isa manondro ny bibidia, fa isa nataon’olombelona+ izany. Ilay isa dia enina amby enimpolo sy eninjato.+